တခါတလေတော့လဲ: ဖတ်ဖတ်ကို မောလို့ 
ဖတ်ဖတ်ကို မောလို့ 
မနေ့ က အလုပ်အစောကြီးပြီးတယ်။ ထိုင်နေတာပဲ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ဖုန်းတလုံးရဲ့အသုံးဝင်မှုက တန်ဖိုးကြီးတယ်။ အားအားနေ သူ့ပဲပွတ်နေမိတယ်။ မနက် ညနေ ည အချိန်ရှိသရွေ့ ပါပဲ။ fb ခနတဖြုတ်ကြည့်တယ်။ instragram ဆိုတာကို ခနခနကြည့်တယ်။ မြွေပွေးလဲဆောင်ထားတယ်။ ဘာappလဲရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းအနည်းငယ်သာရှိတယ်။ ကလေးကလားဆန်ဆန်အရုပ်တွေနဲ့
ဆော့တယ်။ လိုင်းလဲရှိတယ်။ ချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ပျော်မဆုံးမော်မဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်တည်းပဲပြုံးတယ်။ ကဲ ဘယ်သူဘာပြောမလဲ။ ခနခနဘထ္ထရီကုန်တယ်
ခနခနအားသွင်းရတယ် စိတ်ညစ်တယ် သွားလေရာကြိုးယူသွားရတယ် ဘယ်ကောင်းမလဲ။ ပူတယ် အဲဒီလိုပဲလားမသိဘူး။ ဟုတ်မှာပါလို့ကွကိုယ်ပဲပြန်နှစ်သိပ်တယ်။ တစ်ရှုးစကိုရေဆွတ်ပြီး ဖုန်းကိုပေးထိုင်ရတယ်။ ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်တဲ့သဘောပေါ့။
ကဒ်က၂ခု တခုကအိမ်ပြန်တုန်းကယူသွားတာ ပြန်ယူလာတယ်လေ။ အသစ်တခုက ဟောဒီကမ္ဘာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ ။အဲဒါ ဖုန်းကတလုံးတည်း ကဒ်ကနှစ်ခုဆိုတော့ ဒီကမ္ဘာကိုလာဖို့သင့်မိုဘိုင်းကအလိုအပ်ဆုံးမဟုတ်လား ဒါ့ကြောင့် မတ်စေ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့ ကဒ်အဟောင်းကို ဆက်တဲ့သူကဆက်မရဘူးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့၁လနီးပါးဖြစ်လာတယ်လေ။ မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီး ဟိုနေ့ က kajang သွားတာငွေဝင်တယ် အပြန် kotaraya မှာ ၅၀တန်ဖုန်းတလုံးရှာဝယ်တယ်။ရေစိုလို့ ပျက်သွားတဲ့ဖုန်းမျိုးပဲ။ဆိုင်က သူသုံးနေတဲ့ဖုန်းလေး ပေးလိုက်တယ် ၄၅ နဲ့ ၅၀တန်ရှာပါတယ်ဆို ၄၅နဲ့ပေးတယ်။ လူတစ်ယောက်၏စေတနာကို ကျွန်တော် အသိအမှတ်ပြု၏။ ရလာတဲ့ဖုန်းလေးထဲ ကဒ်အဟောင်းကိုပြန်ထည့်တယ်။ များလိုက်တဲ့ miss call တွေ ။ ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်။
အခုဒီကနေပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့နေတယ်။ ညနေကညီမတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံတော့ သူပြောပြတာ အံ့သြနေသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ သီတင်းကျွတ်ရင် မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့ ။ ဝမ်းသာတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက သူတို့ အတွဲကို ကိုယ်ကပဲ မြှားနဲ့ပစ်လိုက်တာလေ ။ ဘောင်းဘီသေးသေးလေး ပြေးမမြင်နဲ့။ ^_^ ပိုက်ဆံစုရမယ်။ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်း ဝယ်ပေးဖို့လေ။ ၅ကျပ်တန် လုံဘူးတစ်လုံးတော့ဝယ်ထားတယ်။ မှတ်ချက် စုဘူးကို လုံဘူးဟုလည်းခေါ်သည်။ အထဲမှာပိုက်ဆံတချို့ကိုပစ်ထည့်ထားတယ်။ ဒီဖုန်းနဲ့ပဲ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်းတွေကို ပျင်းရင် လှမ်းစတယ် လျှာမထုတ်ဘူး Miss call လုပ်တယ်။ နုတ်ထဲမှာ စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း လျှောက်းရေးထားတယ်။ ဝေလဲရှိတယ်။ နွယ်လဲပါတယ်။ ပန်းတပွင့်လဲထိုးထားတယ်။ ပုံတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ လမ်းသွား တွေ့သမျှရိုက်တယ်။ အခုမမွန်ရီက ရူးသွားပြီ။ အလုပ်မှာတစ်ယောက်တည်း။ ပျင်းရင် ပုံတွေကြည့်တယ် instagram မှာတင်တယ်။ သူကလွယ်တယ်လေ။ ဒီမှာတင်ဖို့ ကကျတော့ အလုပ်များတယ်။ ပုံတွေကြည့်ရတာ ရင်အေးတယ်။ တချို့ပုံတွေကို ပြန်ကြည့်ရင် လွမ်းတယ်။ ပြီးရင် သီချင်းတခါတလေ နားထောင်တယ်။ မခံစားနိုင်ဘူး။ အောင်လကတော့ မမေ့ပါနဲ့လို့ ပြောတယ်။ အချစ်လို့ ခေါ်လားဆိုတာတွေလဲပါတယ်။ လမင်းကြီးကိုတစ်ယောက်တည်းစကားပြောတာတွေလဲပါတယ်။ မနက်အိပ်ခါနီးရင်တော့ ပရိတ်ကြီး၁၁သုတ် ကို ဖွင့်တယ် တခါတလေမှပါ။ဘုန်းကြီးရွတ်နေတုန်း ကျွန်တော်အိပ်သွားတယ်။
ဟိုနေ့ ကအပြင်သွားတော့ ချစ်သူလမ်းကြားမှာ တွေ့ တာရိုက်လာသေးတယ် ။အဲဒါလဲ ဖုန်းနဲ့ ပဲလေ။ ထိခရုံး
ပင် ထိလိုက်ရင် အရွက်လေးတွေကပ်သွားတယ်လေ။ မသိဘူးလား ဆူးတွေနဲ့ လေ။ မသိရင်ပြမယ်
အဲဒီလမ်းကြားကနေပြန်လာပြီး ဆိုင်ရှေ့ နားရောက်တော့ အပင်တန်းရှိတယ်။ လက်ကမနေနိုင်ဘူး ရိုက်ပြန်တယ် ဖုန်းနဲ့ လေ။ ဘာပင်လဲတော့ အမည်မသိဘူး ။ အပင်ပဲသိတာ အပင်သိတာပဲတော်ရောပေါ့။
ဘာပင်လဲ သိလား ..........အပင်ပြမယ်နော်။ ပြော
အဲဒါကလဲ ဘာပန်းမှန်းမသိပြန်ဘူး။ လှတယ်ဟုတ်။ လမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ ပန်းပါ။ ဘယ်သူကတန်ဖိုးထားမလဲ။ အခါခါနင်းခြေခြင်းမပြုကြပါနဲ့ ။ ပုံလေးတော့ သိမ်းထားပါရစေ။
၄ခု၁ခုရွေးတဲ့ အဆင်ပြေရင်တော့ သွားမလားစိတ်ကူးတယ်။ မနေ့ကတောင် ဖုန်းဆက်သေးတယ်။ အဆင်ပြေသလားလို့တော်သေးတာပေါ့ ပြေတယ်တဲ့ မပြေရင် ဘယ်သွားအိပ်မလဲ။ ခုလဲဘာထူးလဲ ဆိုင်မှာပဲအိပ်နေတာကို ၆၀၀ နှမျောစရာ။ ဖုန်းပိတ်ထားတယ်ထင်ပြီး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က စိတ်ပူသေးတယ် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြ ဖတ်ဖတ်ကိုမော။ အခု ဒါကိုဖုန်းနဲ့ရေးနေတာလဲ ဖတ်ဖတ်ကိုမောလို့ ။ ပျင်းလို့တစ်ယောက်တည်း စကားပြောနေတာ။
ပြောစရာက ကျန်သေးတယ်။ ဈေးသွားတဲ့အကြောင်း ဆိုင်မှာလိုအပ်တာတွေ သွားဝယ်တာပါ။ ဘာတွေပါလဲဆိုတော့ ဆိုင်အတွက်က သခွားမှည့်သီး တခြမ်း 2..25 ကီဝီသီး၅လုံး 13.99 ဈေးကြီးထှာ ခုမှကြည့်မိတယ်။သခွားသီး၂လုံး 3.16 စပျစ်သီးတထုပ် 6.48 ကြက်သွန်ဖြူ၁၀လုံး4.48 ကြက်အမြစ်၃ထုပ်8 ပလက်စတစ်အိပ်အတွက်ကပြား၂၀တဲ့ ဘာမှအလကားမရဘူး အပိုထည့်ပေးပါလို့ ဘယ်သူ့ ကိုသွားပြောရမလဲ။ ကျွန်တော် စားဖို့ ဝယ်လာတာက ဗူးသီးသေးသေးတလုံး ကြက်သား ၂ပိုင်း ကန်စွန်းရွက် ၁စည်း ရုံးပတေသီး ၁စည်း ကိုက်လန်အညွန့်၁ထုတ် ၁၀ကုန်သွားတယ် ထပ်လဲမရှိတော့ဘူး။
ပြန်ရောက်တော့ ကန်စွန်းရွက် ၁စည်းကို တဝက်ယူပြီး ရေဆေး ရိုက် လှီး အိုးတင် ဆီထည့် ကန်စွန်းရွက်ပစ်ထည့် ကြက်သွန်ဆီမသက်ဘူး မရှိလို့ ။ ဆားနဲနဲထည့်တယ် ချိုမှုန့် မထည့်ဘူး ငံပြာရည် ထပ်ထည့်တယ် မြည်းကြည့်တော့ငံနေပြီ ရေပိုက်ခေါင်းကိုရေဖွင့်တယ် အိုးထဲထည့်တယ် မွှေပြီးရေတွေသွန်တယ်။ မငံတော့ဘူး။ သိန်စမ်းကတော့ မီးသွေးထည့်တဲ့။ သိပါတယ် မရှိလို့ ပေါ့။ လမ်းကြုံရင်မီးသွေး တအိပ်ဝယ်လာအုံးမယ်။ စားရတာကနဲနဲ လုပ်လိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်ကို မောလို့ ။
ကန်ဇွန်းရွက်ကိုဘာနဲ့ လှီးတာလဲ ဖြေ။
ပုံတွေယူမသွားနဲ့ နော်။ နာမယ်မထိုးအားဘူး။ အလုပ်ရှုပ်တယ်။ ^_^
Posted by ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) at 3:47 AM
ဖတ်သွားပါတယ် အကို ..
ဒါနဲ့ ဘယ်ပျောက်နေတာလဲ အစ်ကိုက
ပုံတွေလား မယူပါဘူး...ကိုယ့်ရှိတဲ့ပုံတောင် ဘယ်နား
လား... လက်နဲ့မလှီးလို့ ခြေထောက်နဲ့လှီးချင်သေးလို့
လား...ဟွမ်း....:))))၊ပျင်းရင် ဖုံးနဲ့ ရုပ်ပြောင်ပုံတွေပို့လိုက်
ထိခရုံးပင်လေးတွေ အရမ်းသဘောကျတာ.. ငယ်ငယ်ကဆို လမ်းလျှောက်တိုင်း အဲ့အပင်လေးတွေရှာတယ်.. ကျောင်းမှာ ပေါတယ်လေ.. ထိလိုက်ရင် အိပ်ပျော်သွားတယ်.. ငယ်ငယ်ကတော့ အဲ့လိုပဲ ပြောတာပဲ.. အဲ့ဒါကို ထိခရုံးပင်လို့ခေါ်မှန်း မသိဘူး
ဟုတ်ပ.. စားရတာကနည်းနည်း လုပ်ရတာက မောတယ်.. ကိုယ်နဲ့တူတူစားမယ့်လူရှိရင် တော်သေးတယ်. ခုဟာက တယောက်စာပဲ လုပ်လုပ်နေရတာ မောထှာ >.<
ကန်ဇွန်းရွက်ကို မခြွေပဲ ဓါးနဲ့များလှီးလားဟင် >.<
ဟုတ်. သိပါတယ် .ကြက်သားခုတ်တဲ့ဒါးမကြီးနဲ့ ခုတ်တာပါ။